Mashruuca waraabka ee TİGEM Ceylanpınar wuxuu tagayaa nolosha Berri | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Waqooyi-galbeed ee Anatolia63 SanliurfaMashruuca waraabka ee TİGEM Ceylanpınar wuxuu aadayaa Nolosha Berri
Mashruuca waraabka ee TİGEM Ceylanpınar wuxuu aadayaa Nolosha Berri
21 / 05 / 2020 63 Sanliurfa, Gobolka Waqooyi-galbeed ee Anatolia, GUUD, Headline, DAQIIQADII MINUTE, TURKEY
Mashruuca waraabka tigem ceylanpinar berri ayaa la hirgalinayaa
Wasiirka Beeraha iyo Dhirta Pakdemirli Bakr wuxuu sheegay in shirkada ugu balaaran beeraha Turkiga ee Sanliurfa Ceylanpınar State Farm ay ku dhawaaqday inay soo bandhigi doonto 60 kun oo hektar oo maalgashiga lagu dhameystirayo biyo lagana furayo furitaanka jimcaha, May 22, 2020.
Isagoo Carabka ku adkeeyay in Mashruuca Waraabka ee TİGEM-Ceylanpınar, oo ay fuliso Agaasimaha Guud ee Hawlaha Hawlaha, lagu hirgaliyay kharash maalgashi qiyaastii 70 milyan oo liras ah, Wasiirka Pakdemirli wuxuu caddeeyey in halista soosaarka hoose ay ku baaba'ayso beerta halkaasoo lagu qodayo wax soo saar qallalan shirkada.
Kumanaan kun oo ka mid ah milkiilayaasha guryaha ayaa lagu khaarijin doonaa hal fure
Hababka waraabka casriga ah waxaa loo isticmaali doonaa in lagu gaaro hufnaan sare beero waarta iyo amniga cunnada. Wasiirka Pakdemirli wuxuu yidhi, Waxaan u isticmaalnaa biyo, oo lagama maarmaan u ah kordhinta wax soo saarka, dhaqaale ahaanna leh nidaam waraabinta casriga ah. Shirkad Beeraleedka Ceylanpınar, waxaan ku waraabinaa dhulka nidaamyo casri ah oo ku qalabeysan teknoolojiyadda ugu horumarsan. Waxaan kumanaan hektar hektar oo dhul ah keenaynaa biyaha adoo riixaya badhanka. "
TURKEY MA AHA BIYAHA RICH RIYADA
Mashruucaan, kaasoo la mid ah nidaamyada waraabka ee casriga ah ee lagu cadaadinayo biyaha ee keydsan biyaha si hufan u isticmaal Pakdemirli "Waa la ogyahay sida Turkiga ma ahan waddan hodan ku ah biyaha. Sababtaas awgeed, waa inaan u isticmaalnaa biyaheena sida ugu macquulsan uguna macquulsan. Sababtaas awgeed, dhibic kasta oo biyo ah waxay u noqon doontaa carrada, waxaa jiri doona bacrimin, ciidduna annagaa lahaan doona ”.
4 MARKA DHEERAADKA DHEERAADKA EE DHAQANKA EE DHAQANKA
Isagoo hoosta ka xariiqay in Mashruuca Waraabka ee TİGEM Ceylanpınar, oo noqon doona biyo biyo ay wadaagaan 60 kun oo degoon oo dhul beereed ah, Wasiirka Pakdemirli wuxuu sii waday sida soo socota:
Wadamadan, nidaamka faleebo waa laga saari doonaa, kala duwanaanta dhirta ayaa kordhin doonta mahadnaqa dalaga labaad, iyo dhalidda iyo tayada ayaa kor u kici doonta. Soosaarka miraha wuxuu ka kordhayaa 250 kg / decare ilaa 500 kg / decare oo tayadu wey sii kordheysaa. 25 milyan oo dheeraad ah oo TL ah ayaa la abuuri doonaa sannad kasta. Beeritaanka labaad ee alaabada, daqligan wuxuu sare ugu kici doonaa 70 milyan oo TL. Sidaa darteed, 4 jeer ayaa tabaruc dheeraad ah lagu sameyn doonaa dhaqaalaha dalka. Intaa waxaa dheer, shaqooyin dheeri ah ayaa la bixin doonaa waxaana isticmaalka tamarta hoos u dhici doona waraabinta kanaalada. Qiimaha wax soo saarka ayaa yaraanaya. Isticmaalka biyaha dhulka hoostiisa ayaa hoos u dhici doona ”
Ujeeddadayadu waa in aan la kulmo 2023 kun oo go'aan qaadasho leh biyo dheeraad ah muddo 150
Isagoo cadeynaya in 2008 kun oo dekadood oo dhul ah ayaa lagu waraabiyay Iskaashatada Beeraha ee Ceylanpınar sanadkii 108, Pakdemirli wuxuu yiri, “Laga bilaabo sanadka 2019, waxaan sare u qaadnay cabirka dhul beereedka illaa 613 kun oo diinno. Mashruucan aan furtay, aaggan wuxuu ku kordhay 2020 kun oo aalado marka la gaaro sannadka 673. Hadafkayagu waa in aan soo qaadno 2023 kun oo reero oo dhul ah oo ay weheliyaan biyo ilaa 150 iyo in la bixiyo waraabinta 820 kun oo kafee oo dhul ah oo ku hawlan ”.
KHUDBADDII 18 MILLION LIRAS 800 sano gudahood
Wasiirka Pakdemirli wuxuu intaa ku daray in 2002 milyan TL lagu maalgeliyey Ceylanpınar Beeraha laga soo bilaabo 2019 illaa 721 marka loo eego waraabka, xanaaneynta xoolaha, warshadeynta iyo xarumaha beeraha, iyo maalgashiga la sameeyay 80kii sano ee la soo dhaafay wuxuu dhaaftay 18 milyan TL iyadoo maalgashiga 800 milyan ee TL ah la sameyn doono sanadkaan.
Mashruuca waraabka Ceylanpınar, oo biyo u keeni doona 60 kun oo beerood
Kumanaan acres oo dhul ah ayaa la kulmi doona xarunta waraabka ee Ceylanpınar
Tareen ma jiri karo Ceylanpinar muddo sannad ah
Mashruuca Mashruuca Antalya ee Nolosha
Mashruuca Baadhitaanka ee Babadağ oo la bilaabay dhamaadka Sanadkaan
Mashruuca "Gaziray for Workers" ayaa la fuliyaa
Mashruuca Tareenka Sare ee Nusaybin-Habur
Nusaybin mashruuc dhaqancelinta tareenka ayaa la fuliyaa
Mashruuca ugu horeeya ee lugta dadka ee Alanya
Gawaarida Qabashada Muuqaalka Muuqaalka Muuqaalka Muuqaalka ee Real Madrid
Xarunta Imtixaanka Nidaamka Isgaadhsiinta Qaranka waxaa laga furay Eskisehir
Raadinta Safarka ee Jakarta Surabaya
Nidaamyada waraabka ee cadaadis saarey
Idaacadda Ceylanpprisenar Beeraha
U dhaqaaqista Waqtiga R&D ee Xirfadda Mihnadda
Kala-shaqeeyayaasha ayaa lagu daboolay magaalada caasimadda
Dadka degmada Ceylanpinar ee magaalada Sanliurfa waxay doonayaan tareen casri ah oo ka socda TCDD
Ceylanpınarlılar Doono Tababarka Casriga ah
Samsun Ku-xigeenka Cemal Yilmaz Demir, Nidaamka Biyaha iyo nidaamka tareenka